BBC, Labo Qarax oo ka Dhacay nayrobi Kenya Khasarana gaystay iyo al shabaab oo sheegatay | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC, Labo Qarax oo ka Dhacay nayrobi Kenya Khasarana gaystay iyo...
BBC, Labo Qarax oo ka Dhacay nayrobi Kenya Khasarana gaystay iyo al shabaab oo sheegatay
Ugu yaraan laba qarax oo waaweyn ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegatay in iyaga ay mas’uul ka yihiin waxa uu ku sheegay hawlgalka Nairobi. Inkastoo aysan faafaahin dheeraad ah bixin, Shabaabku waxa ay sheegeen in ay weerareen dhismo muhiim ah oo ku yaal xaafadda Westlands ee Nairobi isla markaana dagaallameyaashoodu ay gudaha u galeen dhismahaasi.
Qaraxyada ka dib waxaa la maqlayay dhawaqa rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta uu weerarka ka dhacay oo ah dhismo ay ku yaaliin hoteel iyo xafiisyo.
Dhawr baabuur ayaa la arkayay iyaga oo gubanaya, waxaa la arkayay dad dhaawac ah oo laga saaraya goobta uu qaraxa ka dhacay. Ciidamada ammaanka ayaa isku gaadaamay goobta uu weerarka ka dhacay.
Previous articleFarmaajo, Madaxwaynaha dawlada xamar oo Weerar dacayad afka ah ku qaaday xildhibaanadii ka Keenay mooshinka isagoo Hortaagan
Next articleDeg Deg, Afhayeenka Booliiska Kenya oo Warkii u danbeeyaay sheegay xaalada Hoteeelkii la Weerary